Budata Ninja Worm APK maka Android
Budata Ninja Worm
Budata Ninja Worm,
Ninja Worm bụ egwuregwu egwuregwu mgbagwoju anya nke enwere ike ịme na ekwentị Android na mbadamba.
Ninja Worm, nke onye nrụpụta egwuregwu Turkey Akita Games mere, na-adọta uche ya na eserese ya. Niji agba agba mara mma, ndị na-eme ihe jisiri ike mepụta egwuregwu na-atọ ụtọ na anya. Egwuregwu na-aga nke ọma pụtara na ijide egwuregwu egwuregwu dị elu yana eserese. Ninja Worm bụ otu nime egwuregwu Turkey kacha mma ewepụtara na nso nso a.
Ebumnuche anyị na Ninja Worm, nke edobere na mbara igwe a na-akpọ Apple-Land, bụ inyere onye isi agwa anyị, ikpuru aka iru ebumnuche ya. Maka nke a, anyị kwesịrị idozi mgbagwoju anya dị iche iche yana ikpo okwu nke anyị kwesịrị ịgafe. Ọ bụghị banyere apụl anyị kwesịrị ịnakọta gburugburu. Na vidiyo dị nokpuru, ị nwere ike nweta ozi zuru ezu gbasara egwuregwu Ninja Worm, yana nwee ohere ilele eserese ya mara mma.
Ninja Worm Ụdịdị
Mmepụta: Akita Games